Gaas oo ku celiyey inaan Puntland raali ka aheyn mooshinka ka dhanka ah RW Cabdiweli – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas oo ku celiyey inaan Puntland raali ka aheyn mooshinka ka dhanka ah RW Cabdiweli
A warsame 27 November 2014
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ahna xarun ganacsiyeedka Puntland.
Soo dhaweynta Madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaa ka qeyb qaatay Wasiiro katirsan xukuumada Puntland, Maamulka Gobolka Barri, Maamulka Degmada Boosaaso, Hogaanka dhaqanka iyo qaybaha kale ee Bulshada.
Intaas ka dib ayaa Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas warbaahinta kula hadlay Madaxtooyada dawladda Puntland ee Boosaaso waxana uu sheegay in safarkiisa uu salka ku hayo u kuurgelida xaaladdaa Nabadgelyo iyo howlaha shaqo ee dawladda ee ka socda Magaalada Boosaaso iyo sidookale xog waraysi uu la qaadanayo mudada uu joogo bulshada iyo waxgaradka ku dhaqan Gobolka Bari.
‘’Waxaa farxad weyn ii ah maanta in aan imaado magaalada Boosaaso oo aan ku imi socdaal gaaban oo muddo asbuuc meelahaas qaadanaya, qorshahaygu waxa weeye in aan joogteeyo la kulanka bulsho weynta Puntland wadatashi badana aan ka yeelano geedi socodka nabada iyo horumarka’’ ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa dhanka kale ka hadlay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Max’ud iyo R/wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed.
Cabdiweli Gaas ayaa ku celiye in Puntland ay kasoo horjeedo mooshinka ka dhanka ah RW, wuxuuna ku taliyey in arrinta xal laga gaaro.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka “Dhowr qof ayaa u xiran dhuxul laga dhoofiyey Baraawe”
UK: 13 dhalinyaro Soomaali ah oo lagu helay kufsi ay u geysteen gabdho yaryar